Sababta ugu weyn ee qalad kulanka hawlgal lathe CNC
Sababta ugu weyn ee qalad kulanka hawlgal lathe CNC sababta ugu weyn ee qalad kulanka in howlgalka of lathes CNC waa in sax wax soo saarka ee qayb kulankii kasta ma aha sare, sax rakibo ma aha sare, iyo Duugga ah ee kulanka lagu jiro isticmaalka la kulmin. soo gudbiyey, kulankii ...Read more »
CNC dayactirka lathe nidaamka feed Howlsocodsiinta dhibaato
1.1 Overtravel Marka mooshin feed ka badan xadka software dhigay by software ama xadka hardware go'aamiyo biiro xadka, afuuftaan overtravel dhici doona, iyo content digniinta ah ee lagu soo bandhigi doonaa on CRT ah. Sida laga soo xigtay nidaamka Buugga CNC ah, gardarrada la suulin karin. , Kor u ...Read more »
unu Common nidaamka xarunta machining Howlsocodsiinta CNC Sida aynu wada ognahay, nidaamka machining xarunta Howlsocodsiinta waa nidaam oo bixiya xoog ay qalab mishiinka. Aan xarunta machining nidaamka Howlsocodsiinta ah, workpiece lama samayn karo. Sidaa darteed, nidaam Howlsocodsiinta waa mid aad u muhiim ah in ce machining ku ...Read more »
Ma machining ee qaybo bir ee xarunta machining CNC wanaagsan ama adag?
First, machining ee qaybo bir ah xarumaha machining CNC waa wanaagsan yahay, waayo, biraha adag ama u wanaagsan biraha. qaybo bir yihiin workpieces caadi. Macaamiil badan ayaa ku weydiin doona haddii xarunta machining aan la isticmaali ee xarunta machining ah si loo farsameeyo qaybo bir ah. Waa "xarunta machining CNC ...Read more »
Waa maxay Chuck vacuum ee xarunta machining CNC ah?
1. Waa maxay Chuck ee vacuum CNC? koob nuugid Vacuum, sidoo kale loo yaqaan spreaders vacuum, waa mid ka mid ah actuators vacuum ah. Guud ahaan, isticmaalka vacuum chucks in ay la wareegaan articles waa mid ka mid ah hababka ugu jaban. chucks Vacuum waxaa laga heli karaa noocyo kala duwan oo Hababka. koob nuugid of caag laga sameeyey noqon kartaa ...Read more »